काठमाडौंमा फेरि लकडाउनका लागि समितिमा सुरु भयो छलफल! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > काठमाडौंमा फेरि लकडाउनका लागि समितिमा सुरु भयो छलफल!
काठमाडौंमा फेरि लकडाउनका लागि समितिमा सुरु भयो छलफल!
admin July 31, 2020 July 31, 2020 Uncategorized	0
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका लगायत केही मुख्य शहरमा पछिल्लो समय कोरोना सं,क्र,मितको संख्या थपिन थालेका छन्। कलडाउन अन्त्य गरेसंगै फेरी कोरोना संक्रमित थपिए पछि लकडाउनक अन्त्य गर्ने निर्णयका बारेमा पुनर्विचार गर्ने विषयमा पनि छलफल हुन थालेको छ। कोरोना भाइरसको ‘इपिसेन्टर’ बन्ने खतरा बढेपछि काठमाडौं उपत्यकामा फेरि लकडाउन गर्ने कि भन्नेबारे छलफल सुरु भएको हो।
पछिल्लो समय उपत्यकामा दैनिक ५० जना भन्दा माथिको संख्यामा संक्रमित बढ्न थालेका छन् । घना बस्ती भएको उपत्यकामा दिनहुँ थपिएको सं,क्रमितको संख्याले चिन्ता बढाएको छ । सरकारले गत ११ चैतदेखि घोषणा गरेको लकडाउन ६ साउनको राति १२ बजेबाट अन्त्य भएको थियो। हाल बजार, छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात, उद्योग, कलकारखाना र सरकारी कार्यालय खुलेका छन्। लकडाउन खुलेसँगै मानिसहरुमा सचेतनाको पक्ष कमजोर देखिँदा कोरोनाको जोखिम उच्च भएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली र मन्त्रीहरु महामा’रीको अवस्था केही समय हेरेर आवश्यक परे पुनः लकडाउन गर्नुपर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली यस अघि पनि लकडाउन खुलाउने पक्षमा देखिएका थिएनन् । उनले जनताको स्वास्थ्य र जिवनको लागि कुनै पनि कुरासंग सम्झौता गर्न नसकिने बताउँदै आएका थिए।
उच्च सरकारी अधिकारीहरुले पनि लकडाउन फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले तयारी गर्दै गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालय र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मा दिन थालेका छन् । काठमाडौं सहित बाहिरका केही सहरमा जसरी कोरोना सं,क्र,मितको संख्या थपिएको छ त्यसले चिन्ता बढाएको हो । वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगन्ज लगायतका स्थानमा समुदाय स्तरमै कोरोना फैलिएको निष्कर्ष स्थानिय तहले निकालेको छ । सीसीएमसीमा रहेका एक मन्त्रीले भने, ‘लकडाउन फेरि गर्नुपर्ने सुझावहरु पनि आउन थालेका छन्।
यद्यपि लकडाउन भए पनि पहिलेजस्तो लामो समय र सबै ठाउँमा नहुने उनले बताए । ‘जहाँजहाँ बढी समस्या देखिन्छ, त्यहाँ लकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ’, ती मन्त्रीले भने, ‘सबैतिर लकडाउन सम्भव र आवश्यक पनि छैन ।’ चिकित्सकहरुले उपत्यकामा हालकै दरमा संक्रमितको संख्या थपिए भयावह अवस्था आउन सक्ने चे’तावनी दिँदै आएका छन्।
गृह मन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै रातिको समयमा हुने काठमाडौं प्रवेशमा रोक लगाइएको जनाएको छ । हाल उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकामा पीसीआर परीक्षण थालिएको छ । बिहीबार उपत्यका प्रवेश गरेकामध्ये २४ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो।
बेइमानी गर्न राजनीतिमा आएको हैनः गोकुल बाँस्कोटा
धारामा ड्रम छोयो भन्दै दलित महिला माथि हसिया प्रहार! टाउकोमा लाग्यो आठ ओटा टाँका! (भिडियो सहित)
तिहारको मुखमा यस्तो दुःखद खबरः ३ दाजुभाई को ह त्या, श्रीमति फरार भएपछि प्रहरीले खोज्दै !